I-Meteorological Phenomena - I-Meteorology Network | I-Web Meteorology (Ikhasi 2)
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngokwakhiwa, izici kanye nomonakalo odalwe yisiphepho saseFabien.
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi siyini isiphepho esishisayo nezimpawu zaso. Funda kabanzi ngakho lapha.
Kule ndatshana sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nesibukeli sesomiso kanye nezici zaso. Funda kabanzi ngakho lapha.
Siyakutshela ukuthi yiziphi izinto ezinkulu ezisemkhathini ezenzeka emhlabeni wethu kanye nezici zazo.
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngesiphepho uDorian nezimbangela zaso. Funda kabanzi ngakho lapha.
Unyaka ngaphandle kwehlobo
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nonyaka ngaphandle kwehlobo nezimbangela zalo. Funda kabanzi mayelana nomsuka wayo nemiphumela.
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nama-icicles, ukwakheka kwawo nezingozi ezingaba khona. Funda kabanzi lapha.
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana neTyphoon Hagibis nezici zayo. Funda ngesiphepho esinamandla kunazo zonke
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-heatwave nezici zayo. Funda kabanzi ngalesi simo lapha.
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nesiphepho saseMiguel nokwakheka kwaso. Funda kabanzi ngakho lapha.
Isimo sezulu kanye ne-allergies
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nobudlelwano phakathi kwesimo sezulu nezinto ezingezwani nezinto ezithile emzimbeni. Funda kabanzi ngakho lapha.
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokushefa nemiphumela ekuyo ezindizeni. Funda ngakho lapha.
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngesiphepho uLorenzo, imvelaphi yaso nobudlelwano obukhona nokuguquka kwesimo sezulu.
Sikutshela yonke imininingwane yesiphepho uGloria iSpain esihlaselwe yiso ekuqaleni konyaka we-2020. Funda ngemvelaphi yaso nemiphumela yaso.
Sikutshela ngokuningiliziwe zonke izici nokubaluleka kwesikali senkanyamba iFujita. Yazi konke lapha.
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngemvula ye-orographic nezici zayo. Funda kabanzi ngalolu hlobo lwemvula lapha.
I-Filomena nokuwa kweqhwa eSpain 2021
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nesiphepho i-Filomena, izimbangela zaso nemiphumela yaso. Funda kabanzi ngokuwa kweqhwa kwekhulu.
Funda konke ngezimvula ezivezayo, ukwakheka kwazo nezici zazo. Siyichaza ngokuningiliziwe lapha.
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-front efudumele, izici zayo nokwakheka kwayo. Funda kabanzi ngakho lapha.
Kulesi sihloko sichaza ukuthi i-dustbin ivela kanjani, iyini imiphumela yayo kanye nemiphumela yayo.
Sikutshela konke odinga ukukwazi ukuze ufunde ukuthi ungalibala kanjani izinga leqhwa. Funda kabanzi mayelana nokuthi yini okufanele uyicabangele.
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-fulgurite nezakhiwo zayo. Funda kabanzi ngalokhu kwakhiwa okuyinqaba.
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-parhelion nezimpawu zayo. Funda kabanzi ngalesi simo sasemkhathini.
Sikutshela konke odinga ukukwazi nge-icing, izici zayo nokuthi kunayiphi imiphumela. Funda kabanzi ngakho lapha.
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi siyini isiphepho esomile nokuthi sakha kanjani. Funda kabanzi ngakho lapha.
Sichaza konke odinga ukukwazi ngezinhlobo ezahlukahlukene zemisebe ekhona nezimpawu zayo eziyinhloko.
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi yiziphi izivunguvungu zasehlobo nokuthi zakha kanjani. Funda kabanzi ngakho lapha.
Sikutshela ukuthi izimvula ezinamandla zakha kanjani nokuthi iba namiphi imiphumela. Funda kabanzi ngakho lapha.
Sikutshela zonke izici zokwelapha nokuthi unamiphi imiphumela. Funda konke mayelana nalesi simo sezulu esibi kakhulu.
Kulesi sihloko sizokutshela yonke imvelaphi nezinganekwane zamaGrikhi ze-Ixion kanye ne-22º solar halo. Yazi konke lapha.
Kulesi sihloko sizokukhombisa zonke izici nemvelaphi ye-rissagas. Funda kabanzi mayelana nalesi simo samanzi.
Kule ndatshana sikutshela ukuthi umkhono uyini, wakhiwa kanjani nokuthi unamiphi imiphumela. Funda kabanzi ngalesi simo sezulu esibi kakhulu.
I-Rime yinto yesimo sezulu eshiya indawo ebabazekayo. Funda lapha ukuthi yakhiwa kanjani futhi imvelaphi yayo.
Kulokhu okuthunyelwe sichaza ngokuningiliziwe ukuthi yini ukuguqulwa okushisayo nokuthi kwenzeka kanjani. Funda ukuthi kuhlobene kanjani nokungcola.
Sichaza umsuka womfula wesihlabathi owadala impikiswano engaka. Lesi yisimo esingajwayelekile. Thola izimfihlo lapha.
Kulesi sihloko sikutshela ukuthi yiziphi izici, zakhiwa kanjani nokuthi imiphi imiphumela enayo imvula. Funda kabanzi ngakho lapha.
Kulesi sihloko sichaza ukuthi yini i-Blob nokuthi ikuthinta kanjani impilo yasolwandle. Ngabe kuzoba nemiphumela ngokuzayo? Yithole lapha.
Iyini i-vortex polar
Kulokhu okuthunyelwe uzokwazi ukwazi ukuthi iyini i-polar vortex nokuthi inamiphi imiphumela kwisimo sezulu sendawo ethintekile. Funda ngakho lapha.
Sikutshela ukuthi amandla okusebenza kwenqwaba yomoya osemkhathini asebenza kanjani. Yazi izinhlobo zezindimbane zomoya nokuthi zibaluleke kangakanani.
Kulesi sihloko ungathola imininingwane eningiliziwe mayelana ne-brontophobia: ukwesaba umbani nokuduma. Faka ukuze wazi ukuthi ungayibona kanjani.
Kulokhu okuthunyelwe ungathola izimfihlo zothingo lomlilo. Yazi ukuthi kungani kwakhiwa lesi simanga esibabazekayo.
Esikhathini sezulu igama elithi occluded front lisetshenziselwa ukubhekisa esimweni esithile sezulu. Kule ndatshana siyichaza ngokuningiliziwe.
Sichaza ngokuningiliziwe ukuthi ingaphambili elibandayo liyini nokuthi lakhiwa kanjani. Faka lapha ukuze ufunde konke ngezimpawu zayo nemiphumela. Ungaphuthelwa!
Faka ukufunda le ndatshana ukuze ufunde ukuthi siyini isichotho nokuthi sakhiwa kanjani. Yazi konke mayelana nalesi simo sezulu kanye nemiphumela yaso.
Funda ngemibono yokuhlangana nokwehluka kwezemeteorology nokubaluleka abanakho. Lapha sichaza konke kuwe.
Sichaza ngokuningiliziwe ukuthi yini isithwathwa nokuthi sakhiwa kanjani. Faka lapha ukuze ufunde inqubo yoqeqesho nokuthi unamiphi imiphumela.
Kulesi sihloko ungathola konke odinga ukukwazi ngezihlambi. Faka futhi ufunde ukuhlukanisa kwezinye izinto.
Funda ukuthi yini i-haze nokuthi yehluke kanjani kwezinye izimo zezulu ezifana nenkungu ne-haze. Yazi konke kahle.
Kulesi sihloko sichaza ukuthi iyini inkungu nokuthi yehluke kanjani enkungwini. Faka lapha ukwazi kabanzi ngayo.
Kulokhu okuthunyelwe ungafunda ukuthi siyini isiphepho, uneziphi izici, sakhiwa kanjani nokuthi yiziphi izinhlobo ezikhona. Unganqikazi ukungena ukuze wazi okwengeziwe.
Kulesi sihloko sixoxa ngokuthi iyini i-aerolith nokuthi imvelaphi yayo kanye nokwakheka kwayo kungenzeka. Ungaphuthelwa lokhu kucabanga ngalesi simanga esixakile.
Funda konke nge-sleet kule ndatshana. Sichaza isizathu sokuthi kungani lokhu kwakheka kwesimo sezulu kwakhiwa nokuthi kusibangela kanjani ukuthi kushelele.
Faka lapha futhi wazi ukuthi i-snowdrift iyini nokuthi yakhiwa kanjani. Funda ngokubaluleka kwe-snowdrift ezikhathini zasendulo.
Isithwathwa esimnyama yinto elimaza kakhulu izitshalo. Sikutshela ukuthi ungazivikela kanjani izitshalo zakho. Faka futhi ufunde konke mayelana nalesi simo.
I-DANA (Ukudangala Okuhlukanisiwe Emazingeni Aphakeme) yisimo sasemoyeni esidala ukwehla kwamakhaza kanye naso nemvula enamandla. Yazi konke ngakho.
Iconsi elibandayo liletha izimvula ezinamandla kakhulu ezidala izinhlekelele nomonakalo emadolobheni amakhulu nasemadolobheni. Funda lapha ukuthi yakhiwa kanjani nokuthi kungani kufanelekile.
I-polar aurora yinto engokwemvelo efanele ukubonwa eguqula isibhakabhaka sibe luhlaza. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izici zayo nokuthi yakhiwa kanjani? Ngena manje.
Ukuduma kwezulu kuyathakazelisa kepha kuyingozi kakhulu ezimweni zezulu. Funda konke ngazo lapha.
Iyini imvula yodaka futhi yakhiwa kanjani
Ishawa lodaka yinto yesimo sezulu eyenzeka eSpain ehlobo nasehlobo. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kungani kwenzeka lokhu?
Iyini futhi yakhiwa kanjani i-cyclogenesis eqhumayo
Funda zonke izici nezinqubo zokwakheka kwe-cyclogenesis eqhumayo. Ngabe ufuna ukwazi imiphumela kanye nezimbangela zayo?
Sikukhombisa izehlakalo ezeqisayo zesimo sezulu ezenzeke kwiplanethi yethu kanye nemiphumela abaye baba nayo. Ngabe uyafuna ukubazi?
Yini i-blizzard futhi kwenzeka kanjani
Lapha ungathola ukuthi kuyini, ukuthi i-blizzard yakha kanjani nemiphumela emibi engaba nayo emadolobheni nasezintabeni.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokwakhiwa kweziphepho nombani nokuthi banaziphi izici. Ngabe ufuna ukufunda kabanzi ngayo?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezici nokwakheka kweLights LaseNyakatho nokuthi ungabona kanjani iLights Lights eNorway. Ngabe ufuna ukufunda ngakho?
Izikhukhula ziyizinto ezingadala umonakalo omkhulu nezinkinga esintwini. Kepha ziyini futhi ziyini izimbangela zazo? Faka sizokutshela konke.
Isiphepho esibandayo nesineqhwa sishiye isigamu sezwe laseSpain limbozwe yiqhwa neqhwa. Kufike imigwaqo efinyelela ku-60 futhi izinkulungwane zabantu zisale zingenamandla.
Lo mbhalo ukhuluma ngesomiso esinzima esihlasela iKapa, ​​esidala ukuthi ngaphandle kokuncishiswa kokusetshenziswa kwaso, sizophela ngo-Ephreli 12.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezinguquko eziphakanyiswe yiCiudadanos ukuvumelanisa uhlelo lukazwelonke lwe-Hydrological Plan ekuguqukeni kwesimo sezulu.
Izikhukhula zizobeka engcupheni izigidi zabantu kungakapheli iminyaka engama-25
Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili nje kuphela, izikhukhula zizoba yizimo zezulu ezingathinta abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-55.
Umehluko omkhulu wesimo sezulu phakathi kweSydney ne-United States
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngomehluko omkhulu wesimo sezulu phakathi kweSydney ne-United States. Ngabe ufuna ukwazi ngalesi simo?
Umkhankaso owethulwe nguMapama wokulwa nesomiso
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngomkhankaso wokuqwashisa ngesomiso owethulwe nguMapama. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi lo mkhankaso umayelana nani?
Isithwathwa eSahara okokuqala ngqa eminyakeni engama-39
Ngokokuqala ngqa eminyakeni engama-39 iqhwa eliwe eSahara, edolobheni lase-Ain Sefra (Algeria). Faka ukujabulela lezi zithombe ezinhle.
Lokhu okuthunyelwe kukhombisa amazinga wamanzi echibi emabhesini aseSpain ama-hydrographic esimweni sesomiso. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Eminyakeni yamuva nje, isomiso esikhulu sithinta iMauritania, lapho sekuvele kunezingane eziyi-120.000 ezinokungondleki okunzima.
Kulokhu okuthunyelwe uzobona isimo samachibi aseSpain bese ubona ubunzima besomiso esibhekene naso. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Isomiso iSpain esibhekene naso singesibi kakhulu eminyakeni engama-20 edlule. Amazinga aphansi kunakuqala. Wenzani ngakho?
Isiphepho u-Ana sifika eSpain
Isiphepho 'Ana' yisimo sezulu esiye sathinta inhlonhlo kanye neziqhingi zaseBalearic. Thola ukuthi yimuphi umonakalo odalekile nokuthi uyaphi.
Siyini isiphepho futhi sakha kanjani
Sichaza ukuthi siyini isiphepho, ukuthi sakhiwa kanjani nezinhlobo ezahlukahlukene ezikhona ukuze wazi okuningi ngalesi simo sezulu.
INASA idale ividiyo ethokozisayo ekhombisa iziphepho ezinkulu, nokuthi umoya uwuthwala kanjani usawoti wasolwandle nezinye izinhlayiya.
INuma, isiphepho esinamandla, sakha eduze kwaseGrisi naseSicily
Eduzane naseGrisi naseSicily, kunesiphepho saseMedithera esibizwa ngeNuma, esesivele sabulala abantu abayi-15. Faka ukuze wazi kabanzi.
ISpain iphelelwa ngamanzi
Amachibi aseSpain aphelelwa ngamanzi. Amazinga okushisa aphezulu kanye nemvula ephansi kuthinta izwe lonke.
Amahlobo ama-6 kwangu-16 omile kakhulu enzeka eminyakeni eyishumi edlule
Ucwaningo olwenziwe yi-University of Zagaroza luveza ukuthi ihlobo elingu-6 kwali-16 ebelomile kakhulu lenzeke eminyakeni eyishumi edlule. Ingabe kungenxa yokuguquka kwesimo sezulu?
Wake wezwa ngamadonathi eqhwa? Faka bese uthola ukuthi lesi simo semvelo sezulu esixakile nesingajwayelekile sakhiwa kanjani.
ISiphepho iLan sisondela eJapane
Isizini yePacific yango-2017 inenkanyezi entsha: iTyphoon Lan. Lesi simo esinamandla sisondela eJapan lapho singadala khona umonakalo omkhulu.
ISiphepho u-Ophelia sifika e-Ireland namuhla futhi siphinde sibe yisiphepho sokuqala esikhulu ukufika eYurophu ngamarekhodi.
I-Ophelia, isiphepho esisha esishisayo esakhiwe e-Atlantic, singadlula eGalicia ngempelasonto. Sikutshela konke okwaziwayo kuze kube manje.
Sekungunyaka wesine owomile iPaki kaZwelonke ihlupheka ngayo futhi kokubili ukuhlukahluka kwemvelo okusekelayo kanye nokulinganisela kwemvelo kuya ngokuya kwehla.
Isikhathi seziphepho sango-2017 sisebenza kakhulu: ngeziphepho eziyisishiyagalolunye, sinamandla kakhulu esikhathini esingaphezu kwekhulu leminyaka.
Ukudangala kwezindawo ezishisayo kusabisa ngokucekela phansi iCosta Rica, iNicaragua neHonduras
Sikwazisa ngokuxineka kwasezindaweni ezishisayo okwenzeka ngo-Okthoba 4, 2017 eCaribbean, okwenza iCaribbean iqaphe ngokubomvu.
Isizathu sombono we-El Niño siyatholakala
Ngokuya ngocwaningo olusha olususelwa emazingeni okuzamazama komhlaba nokunemba kokubikezela okuphezulu, into ka-El Niño kufanele ibuyekezwe.
Ukushoda kwamanzi kulo nyaka kuvalwa ngo-15% ngaphansi kunonyaka odlule. Kubhekwe njengesikhathi esomile kakhulu kulo lonke elaseSpain.
Iziphepho zesikhala, izitha ezithule zoMhlaba
Uke wezwa ngeziphepho zasemkhathini? Lezi yizinto ezingaba nemiphumela emibi kakhulu eMhlabeni. Thola ukuthi zakhiwa kanjani.
Izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo emvelweni zibalulekile ekumelaneni nanoma yiluphi uhlobo lomthelela kwezemvelo. Ufuna ukwazi ukuthi kungani?
Siwubonile umonakalo omkhulu ongadalwa lapho kwenzeka i-tsunami. Siyazi ukuthi zakhiwa kanjani nokuthi yini okufanele ziyenze uma kwenzeka isixwayiso se-tsunami?
Umkhuba weLa Niña
Kukhona nesenzakalo esiphambene ne-El Niño esaziwa ngeLa Niña. Ikhiqiza ushintsho olubalulekile esimweni sezulu seplanethi futhi imiphumela yayo ibalulekile.
IPuerto Rico neVirgin Islands, zacekelwa phansi ngokuphelele ngemuva kokudlula kweSiphepho uMaria
ISiphepho uMaria senze umonakalo omkhulu eCaribbean, ikakhulukazi ePuerto Rico naseVirgin Islands, eziye zacekelwa phansi.
Ucwaningo luqinisekisa ukwanda kwezulu ngesimo sesichotho
Ucwaningo lushicilelwe ephephabhukwini i-Atmospheric Research futhi lutadishe amarekhodi esichotho kusuka ngo-1948 kuya ku-2015. Uthole miphi imiphumela?
Kungani kunezivunguvungu zasolwandle eziningi lapho kunamanzi amaningi olwandle?
. Iziphepho ezitholakala ngqo emizileni emibili yemikhumbi ematasa kakhulu emhlabeni zinamandla amakhulu kakhulu.
ISiphepho uMaria sifinyelela esigabeni esiphakeme kakhulu futhi sichitha isiqhingi saseDominica
Sibika ngeSiphepho uMaria, esisongela iziqhingi zaseCaribbean ngemuva kwezinsuku ezimbalwa kuhlasele i-Irma.
Le yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu esilindele esikhathini esizayo, ikhula ngamandla futhi ibe namandla kakhulu. Ingabe lobu ubuso obubi kakhulu bokuguquka kwesimo sezulu?
ISiphepho uMaría siqale njengesiphepho esishisayo, kodwa ngaleli Sonto sibe yisiphepho, sibhalisa imimoya efinyelela ku-120 km / h
Ngemuva kukaHarvey, no-Irma, manje kuza uMaria, esinye isiphepho
Isiphepho saseTropical uMaría, osekufike amahora ambalwa sifikile esigabeni sesiphepho, sisongela izindawo ezithinte ukudlula kweSiphepho u-Irma
Ukufika kweTyphoon Talim eJapan kuphoqa ukuthuthwa kwabantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingama-600
Isiphepho uTalim senze ukuwa eJapan, izwe lapho ingxenye yalo eseningizimu igcinwa iqaphile yimvula enamandla nemimoya enamandla.
Iziphepho zikwazi kanjani ukuletha izinzuzo eziningi emhlabeni, futhi zisebenza njengendlela elawula yonke into kusuka emazingeni okushisa kuya emvelweni
IVirgin Islands, ebonwa ukumbozwa ngohlaza lwasendaweni eshisayo, ilahlekelwe umbala wayo oluhlaza ngemuva kokucekelwa phansi yiSiphepho u-Irma.
ISiphepho u-Irma siyaqhubeka nokudlulela eNyakatho Florida, isigaba saso sehlela ku-1
Isiphepho u-Irma siphakathi nendawo yokudlula eFlorida. Umoya wayo usehlile, kanti kulindeleke ukuthi baqhubeke nokwenza kanjalo. Ushiya emuva ukubhujiswa okukhulu
ISiphepho u-Irma, esinamandla kakhulu emlandweni e-Atlantic, senza umonakalo omkhulu
ISiphepho u-Irma, manje esesiphepho esikhulu kunazo zonke esakha e-Atlantic Ocean, sisondela ezindaweni ezinabantu abaningi. Kunezaziso zokukhishwa kwabantu abaningi.
Uyini umehluko phakathi kweziphepho neziphepho
Thola umehluko phakathi kweziphepho neziphepho, ukuthi zakha kanjani kanye nezici zaso ngasinye. Yikuphi okuyingozi kakhulu?
Irma, isiphepho esikhulu esisha esiqonde eCaribbean
Isiphepho esisha, esabhabhadiswa ngegama lika-Irma, siphokophele ngaseCaribbean. Ukusuka esivunguvungwini esishisayo uye esivunguvungwini sesigaba 3 ngosuku olulodwa nje.
Ngenxa yesomiso namazinga aphansi amanzi, abakwaMansillan bayakwazi ukuhamba kuleli dolobha eselivele selivele.
Umphumela kaHarvey nezikhukhula ezinkulu azishiye ekuvukeni kwakhe. Lonke usizo nezindlela eziphenduliwe ukuze kuvulwe kabusha indawo ebanzi
Ama-ecosystems athatha isikhathi eside futhi isikhathi eside ukuthola emuva kwesomiso
Kunocwaningo olusha olukhombisa ukuthi imvelo yasemhlabeni ithatha isikhathi eside ukubuyisa isomiso sakamuva kunaleso sekhulu lama-XNUMX.
UHarvey angahlasela iTexas ngoLwesihlanu njengesiphepho
I-Tropical Depression Harvey kulindeleke ukuthi ifinyelele ogwini lwase State of Texas njengesiphepho ngoLwesihlanu. Izaziso zokuqapha sezikhishiwe.
Ubungozi bomlilo cishe lonke elaseSpain buphakathi kakhulu kakhulu futhi bukhulu kakhulu
Amazinga okushisa aphezulu ashaya kuleli sonto abeke cishe lonke izwe engcupheni enkulu, ngenxa yengozi enkulu yemililo.
Umehluko phakathi kwe-Sunstroke ne-Heat Stroke, ukuthi singazivikela kanjani kubo
Ukuqonda umehluko nokuthi kwenzeka kanjani ukushaywa yi-heatstroke noma ukushisa ehlobo kubalulekile, ukuze sizivikele futhi sigweme ububi obukhulu.
ISpain ingelinye lamazwe lapho amagagasi okushisa enza ngamandla amakhulu futhi kaningi. Yini esingayenza ngalokhu?
Yini iziphepho eziluhlaza?
Wake wezwa ngeziphepho eziluhlaza? Ngena sizochaza ukuthi ziyini nokuthi zakhiwa kanjani lezi zimo zesimo sezulu ezibucayi.
Ukuzamazama komhlaba okubili okunamandla kuzamazamisa iChina kungakapheli amahora angama-24, kuhambisana nokuzamazama komhlaba okungaphezu kuka-120. Abosizo oluphuthumayo bayaqhubeka nokusiza izindawo.
Igagasi lokushisa elishaya iYurophu ezinsukwini ezisanda kwedlula, elibizwa ngeLucifer, licibilikisa iqhwa elisuka ezintabeni ze-Alps yase-Italy.
ITropical Storm Franklin, esivele ihlasele inhlonhlo yaseYucatan, izophinde iwele phansi, okungenzeka kube yisiphepho.
Ukushisa kuncibilikisa iMallorca
Izinsuku zokugcina zikaJulayi nezokuqala zika-Agasti zishisa kakhulu esiqhingini saseMallorca, amazinga okushisa afinyelela ku-41ºC.
Izilwane zithinta kanjani futhi zizivikele ekushiseni?
Uhlobo ngalunye lwesilwane lubhekana nemiphumela yalo ngamazinga okushisa aphezulu. Ukusabela kwabo komzimba kanye nokuzala kwabo kuyathinteka.
Igagasi lokushisa elibi kakhulu laseShanghai eminyakeni eyi-145 libulala abane
IShanghai, eChina, ibhekane nokushisa okukhulu kakhulu selokhu kwaqalwa amarekhodi, eminyakeni eyi-145 edlule. Kube buhlungu kakhulu ukuthi kushone abantu abane.
Noma izinhloso zesivumelwano saseParis bezifinyelelwe, lokhu bekungeke kuzinzise u-El Niño. Ufuna ukwazi kabanzi ngomphumela we-El Niño?
Amazinga okushisa aphezulu nobudlelwano bawo nezinga lokufa
Emazingeni okushisa aphezulu, ukufa okuningi. Hhayi nje kuphela ngenxa yokushisa uqobo, kepha ngenxa yokwanda kwayo ngezinsuku. Kubangela ukulimala ngokomzimba nangokwengqondo.
Kuyini ukushisa futhi kunamiphi imiphumela? Uma ufuna ukwazi konke mayelana nalesi simo semvelo, unganqikazi ukungena.
Uyini umcimbi we-El Niño?
Sichaza ukuthi yini into eyi-El Niño, nokuthi inamiphi imiphumela. Ngaphezu kwalokho, sizokutshela uma ngabe kuhlobene nokuguquka kwesimo sezulu. Ungaphuthelwa.
Irekhodi elisha lomlando lokushisa eSpain
Isonto lamarekhodi wokushisa womlando aqhubekayo ezweni lonke. Kokubili ezingeni likahulumeni nasezifundeni ezahlukahlukene.
Uyini umphumela we-foehn?
Kuyinto eyenzekayo lapho inqwaba yomoya onomswakama uphoqeleka ukuba ukhuphuke intaba Ngabe ufuna ukwazi ngomphumela we-foehn?
I-Hypercan, noma ukuthi isiphepho se-mega esilinganiselwe ngokweBhayibheli singasilimaza kanjani isimo sezulu. Noma engekho amarekhodi, kuyaziwa ukuthi ngolunye usuku kungenzeka.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini isiphepho? Sixazulula ukungabaza kwakho ngesimo esikwazi ukudala umonakalo omkhulu futhi sithwale izinzuzo eziningi zempilo.
Kumanje kunezigidi ezintathu nengxenye zabantu baseKenya abadinga usizo lwezenhlalakahle ngenxa yesomiso esibi esishaye izwe.
Siqale ihlobo ngamachibi okugcina angama-53% womthamo wawo ophelele. Lokhu kufana cishe nama-20% ngaphansi kwalokho ebesinakho ngo-2007.
Amazinga okushisa aphezulu nesomiso kuya ngokuya kuba njalo
Manje ehlobo, ngokwanda kwamazinga okushisa nokuncipha kwemvula, kuqala izinkathi ezomile.
Amagagasi okushisa amakhulu aya ngokuvama kakhulu ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu, kepha akukho okwenziwayo ukunciphisa ukukhishwa okubangelwa yilesi simo.
Ukushisa kokuqala eSpain kubeka izifundazwe ezingama-34 ekuxwayiseni
ISpain ibomvu kakhulu, okungenani kuze kube ngoMsombuluko. Igagasi lokuqala lokushisa libeka izifundazwe ezingama-34 esicwayisweni, lapho amazinga okushisa afinyelela ku-42ºC azofinyelelwa khona.
USupercélulas, umbukwane wemvelo othathwe kuvidiyo
Amaseli amakhulu. Ngaphezulu kwamakhilomitha angama-160000 emgwaqeni, amashumi ezinkulungwane ezinhlamvu zekhamera. UChad Cowan ukhombisa umbukwane wemvelo
Thola lapha ukuthi yimiphi imibala engu-7 yothingo lwenkosazana. Kwakhiwa kanjani uthingo? Sikutshela konke ngalesi simo sezulu m
Yini i-globular ray noma inhlansi? Sixazulula ukungabaza kwakho ukuze wazi okuthile ngokuningiliziwe ngesimo sezulu esimangazayo.
Kungaba khona into ka-El Niño engxenyeni yesibili yonyaka
Ngaphandle kokuzinza kulo nyaka we-2017, i-WMO ayinqumi ukuthi i-El Niño isengathuthuka ngo-100%
Ukuguquka kwesimo sezulu kuzothinta amadolobha kakhulu kunasemaphandleni
Ukuguquka kwesimo sezulu kunomthelela wamazinga okushisa akhulayo, kepha lokhu kwanda ngeke kufane kuzo zonke izindawo.
'I-Arlene' yakhiwa ezinsukwini ezingama-40 ngaphambi kokuqala kwenkathi yesiphepho
Isikhathi sesiphepho, yize singaqali ngokusemthethweni kuze kube nguJuni 1, sesivele sino-protagonist: 'U-Arlene', osesungule izinsuku ezingama-40 ngaphambili.
Imithelela yokuguquka kwesimo sezulu emadamini aseSpain ingaba nkulu kunaleyo ecatshangwe ezinhlelweni ze-Hydrological Plans
ISiphepho uKatrina, esinye sezilimaza kakhulu emlandweni wethu wakamuva
ISiphepho uKatrina sibe ngesinye sabantu ababulala kakhulu emlandweni wethu wakamuva. Kubulale abantu abayi-1833, futhi kwadala umonakalo omkhulu e-United States.
Isomiso esenzeka eBolivia sinamandla kakhulu eminyakeni engama-25 edlule. Yimaphi amaphrojekthi akhona okudambisa izinkinga zesomiso?
ESomalia, bangu-196 abantu abashonile ngenxa yesomiso esihlasele kuze kube manje kulo nyaka ngenxa yokushoda kwamanzi nezifo.
ISomalia imemezela isimo senhlekelele kazwelonke ngenxa yesomiso
ISomalia isimemezele isimo sokuxwaya isomiso esihlasela umhlaba.
Iziphepho ziyizibuko zemvelo ezimangazayo, kepha ngabe uyawazi umehluko phakathi kokuduma kwezulu, umbani nombani? Faka sizokusiza ukuwakhomba.
Isimo se- "La Niña" sizogcina izimo ezingathathi hlangothi ekuqaleni kuka-2017
Amathuba okuthi izimo zezemvelo ezingathathi hlangothi zizoqhubeka ngisho nangesimo se- "La Niña" ngamaphesenti angama-70-85.
Igagasi lokushisa elinonya elishaya i-Australia libulala amalulwane amakhulu ase-Australia ahamba ngezinyawo njengoba zilele.
Esinye sezithombe esisakazeka kakhulu kwi-inthanethi yileso sempungushe efriziwe etholakale eMfuleni iDanube.
Ngabe siyayidida imigomo uma kunesimo esibandayo?
Izazi zezulu zisebenzisa amagama athile esingase singawaqondi kahle. Yimaphi amagama asetshenziswa kwiziphonso ezibandayo futhi yini esidideka ngaso?
Yini ama-cyclone futhi yiziphi izinhlobo ezikhona? Uyawazi umehluko phakathi kwesiphepho esivela ezindaweni ezibandayo, isishingishane esishisayo kanye nesiphepho? lapha sichaza zonke izimfihlo zayo
Imininingwane yegagasi elibandayo laseSiberia elihlasela iSpain
Igagasi elibandayo laseSiberia esibhekene nalo lifinyelela eqophelweni eliphezulu kulo lonke elaseSpain. Ake sibone imininingwane.
Igagasi elibandayo eSpain: izwe elifriziwe (ngaphandle kweCanary Islands)
Amagagasi abandayo eSpain ashiya iqhwa emazingeni aphansi kakhulu, aqala olwandle. Kulindeleke ukuba sibe siphi isimo sezulu namuhla nakusasa? Sizokutshela.
Kuyini ukubanda okubandayo?
Igagasi elibandayo liyisimo lapho amazinga okushisa ehla kakhulu emahoreni angama-24. Kodwa avelaphi? Ngena uthole.
Amagagasi abandayo eSpain: amazinga okushisa angaphansi kuka-zero neqhwa enyakatho nasenyakatho-mpumalanga yezwe
Igagasi elibandayo eSpain libhalisa amazinga okushisa angaphansi kuka-zero, ngamaqhwa aze afike ku -13ºC nemimoya enamandla kakhulu efinyelela ku-80km / h.
Isiphepho sishiya umonakalo omkhulu nokufa kwabantu ababili eMurcia nase-Alicante
Izimvula nomoya okuthinta yonke iningizimu-mpumalanga yeNhlonhlo Yase-Iberia naseziQhingini zaseBalearic kubanga umonakalo omkhulu.
Izolo bekuwusuku esingeke silukhohlwe kalula. Imvula engaphezu kuka-120l / m2 ishiye imigwaqo eminingi kuyo yonke iningizimu-mpumalanga ...
Izinhlekelele zemvelo ezimbi kakhulu zango-2016
Sibuyekeza izinhlekelele zemvelo ezimbi kakhulu ezake zenzeka ngonyaka we-2016: iziphepho, ukuzamazama komhlaba kanye nezikhukhula ezidale umonakalo omkhulu.
Ukwanda kokuqiniswa ukugwema imiphumela yezikhukhula
Ubungozi bezikhukhula benziwa yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Yingakho uHulumeni esebenzisa izinguquko emthethweni.
Zingaki izivunguvungu ezakhekile ngo-2016?
Isikhathi seziphepho saseAtlantic sango-2016 besishubile kakhulu, kuneziphepho eziyi-7 iningi lazo elidale umonakalo nokulahleka.
Umonakalo omkhulu nokukhishwa kwabantu ngenxa yezimvula ezinkulu
Ngokunikezwa kwesibikezelo sezulu esenziwe kulezi zinsuku, izifundazwe eziyishumi nanye zaseSpain zixwayiswe yimvula enamandla neziphepho.
Isiphepho eValencia asishiyanga kuphela imigwaqo sigcwele amanzi, kodwa sasihambisana nomfula wamanzi obabazekayo.
ISiphepho u-Otto sifinyelela eMelika Ephakathi, lapho sesishiye abantu abathathu beshonile ePanama, ngaphezu kwabantu abangaphezu kuka-3 10 kanye nomonakalo omkhulu.
I-Argos, isiphepho sokuqala sasebusika sokuqanda i-United States
Kusukela ngoLwesihlanu olwedlule, isiphepho sasebusika i-Argos sishiye ingxenye esenyakatho ye-United States imbozwe yiqhwa neqhwa.
Yiziphi iziphepho ezihlasele kakhulu emlandweni?
Ungathanda yini ukwazi ukuthi iziphepho eziqothuke kunazo zonke emlandweni zibe yini? Uma kunjalo, ngena ubheke izinga.
Ingesinye sezimo ezibhubhisa kakhulu esingazibona eMhlabeni, kepha uyazi ukuthi i-tsunami yenzeka kanjani? Ngena sizokutshela ngakho.
Uphephe kuphi esitelekeni sombani?
Ezinye izeluleko eziyisisekelo zokugwema "ukuheha" imisebe futhi sikwazi ukungabonakali ngoba kulezi zimo asifuni ukuba yi-protagonist.
Kukhona iphesenti labantu elibonisa uhlobo oluthile lokwethuka noma ukwesaba lapho kunezimo ezithile zesimo sezulu. Babizwa ngokuthi ama-phobias emeteorological.
ILa Niña ingaba buthakathaka impela ezinyangeni ezizayo
Kubikwe ukuthi kunamathuba angama-50% kuya kuma-65% okuthi iLa Niña ibe ntekenteke ngekota edlule nasezinyangeni ezintathu zokuqala zonyaka wezi-2017.
Ngubani onquma igama leziphepho?
Wake wazibuza ukuthi ngubani onquma igama leziphepho nokuthi kungani zibizwa kanjalo? Faka ukuthola ukuthi kungani banegama labo.
Manje njengoba iSiphepho uMathewu sishaya okokugcina, ngizophendula umbuzo wokuthi kungani kungenaziphepho eSpain.
Ziyizinto ezingadala umonakalo omkhulu, kepha futhi zinenzuzo enkulu. Thola ukuthi yiziphi izinzuzo zeziphepho.
5 amarekhodi asethwe iSiphepho uMatthew
Ungalahlekelwa yimininingwane futhi uqaphele amarekhodi ama-5 isiphepho esilimazayo futhi esiyingozi njengoMathewu okwazile ukusiphula.
Yiziphi izinhlobo zeziphepho ezikhona?
Yize zibukeka zifana, kunezinhlobo ezahlukahlukene zeziphepho. Faka ukuthola ukuthi zihluka kanjani nokuthi yiziphi izakhiwo ezingathathwa njengeziphepho.
Sakha kanjani isiphepho
Sizokutshela ukuthi isiphepho sakha kanjani, isimo sezulu esimboza isibhakabhaka ngamafu futhi esivame ukuletha imvula.
Umehluko phakathi kwesiphepho, isiphepho nesiphepho
Bhekisisa kahle umehluko phakathi kwezigameko ezaziwa kakhulu njengesiphepho, isiphepho kanye nesiphepho.
UNicole, isiphepho seshumi nane sesine esishisayo esizokwakhiwa e-Atlantic
UNicole ubunjwe izolo, isiphepho seshumi nane sesimo sezulu esishisayo sesizini yesiphepho i-Atlantic, kuze kube manje, esingazange sidale monakalo.
ITropical Storm Matthew iba yisiphepho sesigaba 2
ITropical Storm Matthew, esungulwe ngoSepthemba 28, namuhla isiphenduke isiphepho esigabeni 2, esithinta ama-Lesser Antilles.
Ingabe iziphepho zingaba khona eSpain?
Iziphepho ziyizinto ezingavamile eSpain, kodwa izindaba ezinhle ukuthi kungenzeka kube neziphepho eSpain. Ukungena.
Sikutshela ukuthi siyini isomiso, into engaba nemiphumela ebaluleke kakhulu empilweni yayo yonke indawo ethintekile.
Ngokuya ngocwaningo olusha, ukushintsha kwesimo sezulu kuzoba nomthelela omncane esomisweni kunokulindelekile. Sikutshela ukuthi kungani.
Iziphepho ezibhubhisa kakhulu neziphepho eminyakeni yamuva
Manje njengoba kuyisiphepho nenkathi yesiphepho, ngizokukhombisa labo asebengene emlandweni eminyakeni yamuva ngamandla abo okubhubhisa.
Ukushisa okufudumele ngoSepthemba, into engajwayelekile
Sibhekene nokushisa okungajwayelekile eSpain ngalesi sikhathi. Amazinga okushisa afika ku-42ºC asivimbela ekuqedeni ihlobo ngokujwayelekile. Yini lokhu?
Amagagasi okushisa amabi kakhulu eSpain
Ungathanda ukwazi ukuthi imaphi amaza okushisa amabi kakhulu abe eSpain? Faka ukuthola izinsuku ezimbi kakhulu zehlobo izwe elibhekane nazo.
Umbani ubulala izingulube ezingama-323 eNorway
ENorway kuye kwenzeka okuthile okungajwayelekile: umbani ubulale izingulube ezingama-323 eNational Park. Kuyamangalisa iqiniso? Faka ukuze wazi kabanzi.
ISiphepho uGastón siyaqina e-Atlantic, sizofika eSpain?
ISiphepho uGastón, isikhathi esinamandla kakhulu sesiphepho sase-Atlantic, siya siba namandla. Ingabe izofika eSpain? Sizokutshela.
Uyini umcimbi wesimo sezulu wesiphepho
Ungalahlekelwa yimininingwane futhi unake kahle izici zesimo sezulu ezifana nesiphepho.
Isiphepho iMindulle sihlasela iJapan
ISiphepho iMindulle esibhubhisayo sihlasela inhlokodolobha yaseJapan ngemimoya enamandla yesiphepho engamakhilomitha angama-180 ngehora.
Ukuhlaselwa kwamaphela eNew York ngamandla okushisa
INew York City ihlaselwa ngamaphela aseMelika, futhi ukuthi amazinga okushisa aphezulu nomswakama kwenza lezi zinambuzane zisebenze.
Izintshisekelo ezi-3 mayelana namalambu aseNyakatho
Ungaphuthelwa imininingwane futhi unake kahle izifiso ezi-3 okufanele wazi ngamalambu akhangayo asenyakatho.
I-NOAA ilindele inkathi yesiphepho esebenzayo e-Atlantic
Sizoba njani isikhathi sesiphepho sase-Atlantic? Ngokuya nge-NOAA, kulindeleke ukuthi isebenze kakhulu kunokujwayelekile. Faka ukuze wazi kabanzi.
Faka ukuthola ukuthi iyini imiphumela yesimo seLa Niña, futhi yiziphi izindawo ezithinta kakhulu kuzo. Ungaphuthelwa.
Izintshisekelo eziyisithupha mayelana neziphepho ezizokumangaza
Ngabe ucabanga ukuthi wazi konke mayelana neziphepho ezishisayo? Faka sizokutshela izifiso eziyisithupha mayelana neziphepho ezizokumangaza nakanjani.
Akhiwa kanjani amapayipi amanzi?
Ama-waterpouts noma ama-waterspouts yizinto ezingavamile kakhulu zesimo sezulu ezivela olwandle. Faka ukuthola ukuthi zakhiwa kanjani.
Bekuyini ukushisa okukhulu kakhulu eSpain?
Qaphela kahle futhi ungalahlekelwa yimininingwane yalokho okuye kwaba ukushisa okubi kakhulu iSpain eye yahlupheka futhi yahlupheka kukho konke umlando wayo.
Ngabe imoto yakho ivuke igcwele ukungcola? Imvamisa kuyinto eyenzeka okungenani kanye ngonyaka. Thola ukuthi kungani lina udaka.
Ungathanda ukubona ezinye zezimo zezulu ezingavamile? Uma kunjalo, ufike endaweni efanele. Ngena uze umangale.
Igagasi lokuqala lokushisa selifinyelele kulo lonke elaseSpain kanti ne-heatwave ibonakele, okudala ukuthi amazinga okushisa adlule ama-degree angama-40.
Izintshisekelo ezi-4 mayelana neziphepho
Lezi ngezinye zezinto ezimangalisa kakhulu, kepha ngabe sazi konke ngazo? Faka sizokutshela izifiso ezi-4 mayelana neziphepho ezizokumangaza.
Kungani kwenzeka amaza okushisa?
Manje njengoba iSpain ihlushwa amazinga okushisa aphezulu, yisikhathi esihle sokuphendula umbuzo wokuthi kungani amagagasi okushisa enzeka.
Sikutshela izintshisekelo ezintathu ezithakazelisayo mayelana neziphepho, lezi zimo zezulu ezikhanyisa isibhakabhaka futhi ezisithokozisa kakhulu.
Izimo zesimo sezulu ezedlulele yilezo okuthi, ngenxa yamandla azo, zidale noma zingadala umonakalo omkhulu kubantu. Thola ukuthi ziyini.
Liyini iqhwa elibomvana
Ungalahlekelwa yimininingwane futhi unake kahle ukuthi siyini isimanga seqhwa elibomvana elivame ukwenzeka kwezinye izindawo zomhlaba.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini iTherral, lowo moya ofudumele ofana nehlobo? Ngena ukuze wazi indlela yeCatabatic Wind.
Lesi kuzoba yisizini yeziphepho e-2016 e-Atlantic ngokusho kwe-NOAA
Sizoba njani isikhathi sesiphepho sase-Atlantic ngo-2016? Ngokuya nge-NOAA, kungaba mnandi kakhulu kunokujwayelekile. Faka ukuze wazi kabanzi.
Isimo seLa Niña sizokwenzeka kulo nyaka futhi izibikezelo azizinhle ngoba zizofana nemiphumela ye-El Niño.
Ezinsukwini ezimbili ezedlule sonke isifundazwe saseMalaga sahlangabezana nesimo esibizwa ngokuthi yi-mini gale ejwayelekile endaweni yaseCantabrian.
Isikhathi sesiphepho sase-Atlantic sizoba nomsebenzi omaphakathi
Isikhathi sesiphepho e-Atlantic sizoba nomsebenzi omaphakathi, ngezivunguvungu ezinhlanu, ezimbili zazo zinamandla amakhulu. Faka ukuze wazi kabanzi.
Yini i-hydrometeor futhi yiziphi izinhlobo eziyinhloko?
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini i-hydrometeor? Uma kunjalo, unganqikazi bese ufaka. Sizokutshela nezinhlobo eziyinhloko ezikhona. Ngabe wena noma uzolahlekelwa?
Wake wezwa ngezikhukhula? Aziqondakali kancane futhi ziyingozi eziyingozi, ezikwaziyo ukudala izinkinga eziningi. Ukungena.
Zenzeka kanjani izivunguvungu zesihlabathi nothuli?
Iziphepho zesihlabathi nezothuli ziyinto eyenzeka kakhulu eyenzeka ezindaweni ezomile nezingenamvula emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eSahara.
ICielomoto, ukuzamazama komhlaba emoyeni
ICielomoto, ukuzamazama komhlaba okwenzeka emoyeni futhi ngakho akukabi nencazelo enengqondo. Thola okuningi mayelana nalesi simo sezulu
I-brinicle noma umunwe wokufa, isiphepho solwandle
I-brinicle, eyaziwa nangokuthi umunwe noma ingalo yokufa, yisiphepho sasolwandle esakha olwandle eduze kwezigxobo. Thola ukuthi lakhiwa kanjani.
Amandla amangalisayo ka-El Niño »Godzilla»
I-El Niño yinto yemvelo yezemvelo ehlobene nokufudumala koLwandle i-Atlantic. Kodwa-ke, eyamanje izoba nzima.
Thola izindawo ezihamba phambili emhlabeni ukubona izibani zaseNyakatho futhi ujabulele isimo sezulu esihle kunazo zonke emhlabeni.
Njengoba kugawulwe imihlume, iziphepho zibangele izinhlekelele eziningi. Kepha kungani lezi zimiso zemvelo ziwusizo? Thola.
Ungalahlekelwa yimininingwane yamazwe aseplanethi ahlupheka futhi ahlupheke ngamazinga okushisa aphansi nalapho ubusika bunzima kakhulu futhi bunzima.
Isiphepho esivuthayo siyisimo sezulu semvelo sezulu esihlaba umxhwele kodwa esonakalisa kakhulu. Buka ividiyo yokuzalwa kwakhe. Kuzokumangaza.
Ingabe kungaba neziphepho eSpain?
Lezi zimo zivamile kakhulu e-United States of America, kepha kungahle kube neziphepho eSpain. Faka ukuze wazi okuningi ngabo.
Izinhlekelele zemvelo ezibhubhisa kunazo zonke emlandweni
Imvelo ngezikhathi ezithile isikhombisa amandla ayo, amandla ayo. Siyakutshela ukuthi yiziphi izinhlekelele zemvelo ezibhubhisa kakhulu emlandweni.
Ama-movie we-4 ngezinhlekelele zemvelo
Yize iqiniso lihlale lidlula inganekwane, ungaphuthelwa ama-movie alandelayo amane ngezinhlekelele zemvelo ongazibuka noma kunini lapho ufuna khona.
Ukwakheka okungu-5 okuhle kwesiphepho
Jabulela lawa mavidiyo ezinhlobo ezi-5 ezihlaba umxhwele zeF5. Buka ukuthi zakheka kanjani, kusukela ekuqaleni kuze kube yilapho zithinta phansi. Ukungena.
Ungaziphatha kanjani uma kwenzeka kuqhuma amanzi
ISpain ihlangabezana neziphepho zikagesi kulezi zinsuku ezihambisana namanzi nesichotho. Qaphela ukuthi ungenza kanjani uma kwenzeka kuqhuma amanzi anamandla.
Iziphepho ezintathu zeSigaba 4 zishaye iPacific Ocean ngasikhathi sinye
Iziphepho ezintathu zeSigaba 4 zishaye iPacific Ocean ngasikhathi sinye, kwaveza into engakaze ibonwe futhi enomlando ngokuphelele wezulu kuze kube manje.
4 umbukwane sezulu izenzakalo zemvelo
Ungalahlekelwa yimininingwane bese uthola izenzakalo ezi-4 ezimangalisayo kakhulu zezulu emvelweni ezizokwenza uhlale nomlomo wakho uvuleke kakhulu.
Ukushisa kuzithinta kanjani izilwane
Igagasi lokushisa elide kakhulu izwe lonke elihlupheka kulo alithinti nje kuphela abantu, izilwane nazo ziyahlupheka futhi ziyahlupheka ngakho.
Konke odinga ukukwazi ngombani
ISpain ibhekane nesimo sezulu esingesihle ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngesiphepho esiningi nombani, khona manjalo ngizokutshela konke odinga ukukwazi ngazo.
Iqala kanjani i-tsunami
Lesi ngesinye sezimo zezulu ezibhubhisa kakhulu, ngoba amagagasi alo angalinganisa ngaphezu kwamamitha ayishumi. Thola ukuthi i-tsunami iqala kanjani.
Ungalahlekelwa yimininingwane futhi uqaphele uma ufuna ukwazi ukuthi kukhethwa kanjani amagama ezinkanyamba, iziphepho nezinye izimo zezulu
Ukuzamazama komhlaba eNepal, okubikezelwe ososayensi
NgoMgqibelo odlule kube nokuzamazama komhlaba okunamandla eNepal, okungaba yingxenye yethonya elibumba izwekazi laseNdiya.
Imibuzo emi-5 ezokwenza ukuthi ukuqonde kangcono ukuqhuma kwentaba-mlilo iCalbuco
Bhekisisa le mibuzo emi-5 elandelayo ezokusiza ukuthi uqonde kangcono konke okuphathelene nokuqhuma okumangazayo kwentaba-mlilo iCabulco
Izikhukhula ziyizinto ezingadala umonakalo omkhulu kukho konke okubonakalayo nasempilweni yomuntu. Kodwa uyini uzamcolo?
Wake wazibuza ukuthi isiphepho sakha kanjani? Lesi simo sezulu sihlale sihambisana nokuvunguza okunamandla komoya neziphepho.
Ungalahlekelwa yimininingwane yokuthi inkungu idalwa futhi yaqalwa kanjani, enye yezinto ezimangazayo kakhulu futhi ezicasulayo zesimo sezulu ngenxa yokungabonakali.
Amalanga amathathu esibhakabhakeni!
Amalanga amathathu angumkhiqizo wesimo sezulu womthelela wamehlo okhiqizwa ukukhanya uma usushayisene namakristalu eqhwa amafu.
Umlilo weSan Telmo: uyini?
Umlilo waseSan Telmo yinto engavamile kakhulu, kodwa edonsa ukunakwa okuningi, ngoba iyi-plasma engeke ivuthe.
Kuyini ukuzamazama komhlaba futhi kukalwa kanjani?
Ukuzamazama komhlaba yizimo zezulu ezivela kaningi ezindabeni. Kepha kuyini ukuzamazama komhlaba futhi kukalwa kanjani?
Imvula ebomvu yinto exakile futhi engakholeki kahle yesimo sezulu, kangangoba nanamuhla kukhona abacwaningi abazibuza ukuthi iyini kanye kanye.
Iziphepho ziyisimo sezulu esingaba simbi kakhulu. Izwe elithinteke kakhulu kubo yi-United States, eneziphepho ezingaphezu kwenkulungwane ngonyaka.
Inani lemvula elinganiselwa ku-wax yesitshalo
Inani lemvula elilinganiswe emgodini wezitshalo zomhlaba likhanyise kakhulu ngesimo sezulu sezinkulungwane zeminyaka ezedlule, nokwandisa ukutadisha okungalungile kwamaphethini wokulinganisa kwirekhodi lezinsalela.
I-Anthropocene, ingabe umuntu "ufanelwe" inkathi yakhe yokwakheka komhlaba?
Umthelela omkhulu isintu esiye saba nawo kwiplanethi nasemvelweni waso obangela ukuqothulwa kwemvelo ngisho nokuguqula imijikelezo yemvelo neyesimo sezulu kwenza kube nokwenzeka ukutadisha ukungeza lokho okubizwa ngokuthi yi-Anthropocene esikalini somhlaba wonke somhlaba.
Izindawo ezibandayo kangangokuba kubonakala kungenakwenzeka ukuthi abantu bahlale kuzo
Izakhamizi zezindawo ezinjengeVerkhoyansk, Yakutsk noma i-Oymyakon (zombili eRussia) ziphila izimpilo ezihluke kakhulu kunezethu, okungenani ebusika. Isibonelo, abashayeli kula madolobha bashiya izimoto zabo zidatshuliwe ezindaweni zokupaka amahora amaningi ngenkathi bethenga noma benza okuthile, imvamisa kudingeka bashise uwoyela othambisa ezimotweni zabo nge-blowtorch ukuze bawuqede.
Iziphepho, kungani zibizwa kanjalo?
Kuwo wonke umlando, iziphepho zithole amagama ahlukene. Ukuhlukaniswa kwabo kushintshile eminyakeni edlule kwaze kwafinyelela ohlelweni lohlu.
I-tsunami yaseCanarian isongela i-United States
Ukudilika kwentaba-mlilo esiqhingini saseLa Palma kungadala i-tsunami ekwazi ukuwela i-Atlantic
Ngemuva kwesiphepho: izithombe
Ukuqoqwa kwezithombe, ezithathwe e-United States, okusisiza ukuthi siqonde ukuthi labo abathintekayo babhekana kanjani nokudlula kwesiphepho.
Ucwaningo olungaphezu kwengxenye yekhulu leminyaka futhi kusalokhu kuyindida ukuthi kungani amatshe ezihamba zodwa e-Death Valley eCalifornia.
Uthingo lwenkosazana oluphendukezelwe luyisimo sezulu esidinga izimo ezihlukile kunothingo olujwayelekile. Indawo emhlabeni lapho kuvame ukubonwa khona yiNorth Pole, yize ukuguquka kwesimo sezulu kungadala ukuthi zenzeke ezindaweni ezipholile ngokwengeziwe.
Izithombe zokubhujiswa okubangelwe yisiphepho u-Andrew (ezafinyelela esigabeni esiphakeme kunazo zonke, 5) ngonyaka we-1992 endaweni yaseMiami naseningizimu yeLouisana.
Funda ukuthi yini okufanele uyenze ngesikhathi sezulu esibi kakhulu
I-Federal Emergency Management Agency yase-United States isinikeze izakhamizi zayo uchungechunge lwemihlahlandlela yokuthi zingazivikela kanjani yona nemindeni yazo ngesikhathi sezulu esibi kakhulu, esanda ngokwanda ngenani ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu.
Iziphepho Zesihlabathi e-Dubai
Isithombe nevidiyo yezivunguvungu zesihlabathi ezibabazekayo ezenzeka eDubai.